जिन्दगीको बाटोमा देखेको सपनाहरू, - Ddus Gajurel Blogs
जिन्दगीको बाटोमा देखेको सपनाहरू,
on Tuesday, September 08, 2009 in अनुभब
अबचेतन अबस्थामा हाम्रो मस्तिस्क मा उत्पन्न हुने तरङ्ग लाइ सपना भनिन्छ । हरेक रात दिन केही नभनि मानिसहरू सपना देखी रहन्छन । कसैले राम्रो कसैले नराम्रो , कसैले औकात अनुसार को देख्छन त कसैले औकात भन्दा माथी उठेर देख्छन, जस्तै प्रकारले देखे पनि , दिउसै देखे पनि , राति देखे पनि, सपना सबैले देख्छन, … कोही खुसी हुन्छन त कोही दुःखी सपना बाट ।कतिका देखेका सपनाहरू पुरा हुन्छन त कतिका बिलाएर जान्छन । सपना एक लक्क्ष बनाएर हिड्ने पनि प्रसश्तै भेटीन्छन ।
केटाकेटी अबस्थामा पापाको जस्तै पैसा कमाउने भएर आफैले चकलेट किन्ने सपना देख्छन बच्चाहरू । बिध्यालयमा भर्ना भए पछी बिध्यार्थीहरूले आफ्ना शिक्षकहरू बाट कम गृहकार्य को सपना देख्छन । कक्षा 3/4 सम्म सबै ठिकठिकै जान्छ, तर कक्षा 7/8/9…+ क्रमश सपनाहरू बड्दै जान्छन । हरेक पल नयाँ नयाँ सपनाहरू सजिन थाल्छन । कोही कोही ले राम्रो बाटोमा हिड्ने सपना देख्छन त कोही कोही ले नराम्रो । भनिन्छ यो बेला साथिसंगत को कारण ले गर्दा बिग्रिन्छन रे !!!! तर मलाइ लाग्छ कि साथिहरूको कारण ले बिग्रिनु भन्दा पहीले परिवारको कारण ले नराम्रा साथिहरू ( सबैको कहानि उस्तै उस्तै) को संगतमा पर्न जान्छन । मानिसको स्वभाब, बानि बेहोरा को निर्धारण हुने बेला पनि यही हो । सायद परिवारले धेरै केयर, उसको हरेक कृयाकलाप मा हात हाल्छन भने उ स्वभाबले नै कडा हुन जान्छ, जसको कारण उनिहरू परिवार बाट धेरै टाडा भाग्न खोज्छन । जब किसोर अवस्थामा प्रबेश गर्छन तब त झन अझ भेरै सपनाहरू सजिन थाल्छ । केटा होस या केटी कुरा उस्तै उस्तै , यो अबस्थामा बिपरीत लिङ्गी प्रतिको आकर्सण ले त अझ धेरै असर पार्छ । यो किसोर अवस्थामा दुइ किसिमका केटाकेटीहरू भेटीन्छन । एक सम्पुण कुरामा सक्क्षम हुन्छन भने अस्को तर्फ हरेक कुरा बाट बन्थित हरेका ………।। सक्नेले आफ्नो/आफ्नी लिएर घुम्छन । त्यो त उनिहरूको कुरा हो । तर जो संग केही छैन उनिहरूको माझमा गएर दिनभरी/रातभरी भएको कुरा लाइ बडाइ चडाइ गरेर बयान गर्दा सुन्ने ब्यक्ती पनि एक पल्ट कल्पना गर्न पुग्छ । उसले पनि सपनाको संसारमा रमाउन थाल्छ । यस्तै यस्तै मा बित्छ यस समय । जब 17/18 बर्ष पुग्छ युबा/युवती तब उनिहरूमा केही पारीवारीक जिम्मेवारी थपिन जान्छ । केही काम गर्न तिर लाग्छन त कोही बराल्लिएर हिड्ने गर्छन । यो अवस्थामा केही नपाए पछी भएको काम बिगार्ने, काम हुन नदिने जस्ता कुराहरू मा सामिल हुन्छन युवायुवतिहरू, । । ।
यो भन्दा माथि के हुन्छ मलाइ थाहा छैन, अब अनुभब गर्दै यहाँ लेख्दै जाने छु । अब म मेरो सपनाको बारेमा बताउदै छु जुन पुरा हुन मैले मेरो परिवार, समाज र देश लाइ भुल्नु पर्छ । म सानैदेखि सपनाको संसारमा रमाउदै आएको छु । हरदिन नयाँ नयाँ सपना देख्नु मेरो काम थियो, सानैदेखि यस्तो भइ रहेको छ म लाइ । धेरै कम ले मात्र हिम्मत गर्ने यो पेसा पैसा कमाउनको लगि सटकट राष्ता हो । भनिन्छ यो पेसा मा पस्न सजिलो छ तर निस्किन लाइ एउटै मात्र उपाए छ । मेरो यस पेसा प्रति पहीले न त कुनै लगाब थियो न त कुनै इच्छा थियो तर समयले मेरा सपनाहरू यस पेसा तिर देखाउन थाल्यो । म सानो छदा देखि नै समयले बिभिन्न तबर बाट धोका दिदै थियो । केही गर्न नगरे पनि हरेक कुरामा अनुभब बोटुल्दै आइयो । आफु त सानै बाट लुते लाम्रे मान्छे । सबैले लुते छस भनेर हेपि हाल्ने । कसैलाइ केही गर्न सकिदैन थियो मात्र मनमनै पख्ला तलाइ मेरो पनि दिन आउछ अनि जानेको छु सोच्दै मात्र बसियो गर्न चहि केही गरीएन ।
अहिले बिसेस कारण बाट बाहिर जानु पर्यो बाकि लेख छिटै नै अपडेट गर्ने छु ……………..To Be continue,
Hi Umesh jee tapaiko blog dherai ramro lagyo aru prayas gardai janus mero tapailai pragatiko kamana chha.sathai "BADA DASHAIN 2066 KO HARDIK MANGALMAYA SHUVAKAMANA".
Anonymous September 18, 2009 at 12:49 AM
हजुरलाइ पनि धेरै धेरै दसैको शुभकामना